अस्पतालको बेडमा दशैं – नर्सले टीका लगाई दिदा बिरामीको मुहारमा खुसी ! – Dainik Sangalo
उडिरहेको जहाजभित्र महिला र बिरालो जे गरे त्यसले सबै यात्रुलाई हैरान बनायो, सोसल मिडियामा भाइरल
लाखौको सुन भएको कालो झोला फेला परेको हुँदा हराउनु हुनेले सम्पर्क गर्नुहोला।
महिला हिंसा वि रुद्धको अभियानकै बेला झापामा पतिको कु, ट, पि, ट बाट पत्नीको मृ, त्यु
फेरीपनि छोरी नै पाउँछेस् भन्दै श्रीमानले काठमाडौको कोठामा अलपत्र पारेर हिडेपछी २१ दिने सुत्केरी र नाबालकको बिचल्ली (भिडियोसहित)
नेपालकी जुरेलीले अमेरिकी रेस्लरलाई हराइन्
अस्पतालको बेडमा दशैं – नर्सले टीका लगाई दिदा बिरामीको मुहारमा खुसी !
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ३०, २०७८ समय: ९:३८:०२
नेपालगन्ज : नेपालीहरुको महान पर्व बडा विजया दशमी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार रमाइलो गरेर मनाउँदै गर्दा अस्पतालमा उपचारार्थ रहेका बिरामीहरुले बेडमा नै
टीका लगाएर दशैं मनाएका छन् । भेरी अस्पतालमा विभिन्न जिल्लाका भर्ना भएका बिरामीहरुलाई त्यहाँ कार्यरत नर्सिङ स्टाफ पार्बती बुढाथोकीले बिरामीलाई दशैंको टीका लगाईदिएर उनीहरुलाई घरको सम्झना बिर्साउने कोशिस गरेकी छिन् ।उनले बिरामीलाई टीका लगाइ दिएर फलफूल दिइन भने अाफुले पनि बिरामीको हातबाट टीका लगाएको बताइन् ।
बुढाथोकीलाई तपाईंलाई कस्तो महसुस भएको छ भनि
प्रश्न सोध्दा उनले जीवनमा धेरै पटक बुबा आमाको हातबाट टीका लगाइन्थ्यो आज उहाँहरुको हातबाट लगाउदा र उहाँको मुहारमा खुसी ल्याउन आफुले लगाइदिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको उनले बताइन् ।
थप समाचार पढ्नुहोस :मोटोपन कसरी घटाउने, तौल कसरी कम गर्ने ? अहिले धेरैको निम्ती टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ यो । यसैको समाधानका लागि कोही जिम धाइरहेका छन्, कोही योगको शरणमा पुगेका छन् । कसैले चिकित्सकिय विधी अपनाएका छन्, कसैले खानामा कटौती गरेका छन् ।
तौल बढ्नु वा मोटोपन आफैमा समस्या हो । यसले अरु समस्यालाई समेत निम्त्याउँछ । शरीर भद्दा र असुहाउँदिलो देख्ने मात्र होइन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगको खतरा पनि बढाउँछ ।
त्यसैले अहिलेका पुस्ताका निम्ति मोटोपन वा तौल नियन्त्रण ठूलो चुनौती बनेको छ । आज हामी तपाईलाई मोटोपन घटाउने केही खानेकुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ :
लसुनले एक प्राकृतिक एन्टी बायोटिक र सुगरलाई नियन्त्रित गर्ने काम गर्दछ । लसुनले शरिरमा ती हर्मोनलाई सक्रिय गर्न काम गर्दछ जसले बोसोलाई जम्मा हुन दिँदैन । आफ्नो खानामा लसुनलाई समावेश गरेर हेर्नुहोस् ।
मोटोपन कसरी घटाउने, तौल कसरी कम गर्ने ? अहिले धेरैको निम्ती टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ यो । यसैको समाधानका लागि कोही जिम धाइरहेका छन्, कोही योगको शरणमा पुगेका छन् । कसैले चिकित्सकिय विधी अपनाएका छन्, कसैले खानामा कटौती गरेका छन् ।
Last Updated on: October 16th, 2021 at 9:38 am
१६८ पटक हेरिएको
१.	भक्तपुरको घर,५० लाख र महिनाको ५० हजार दिएर जेठी श्रीमतीसँग टाढिए निखिल
२.	अमेरिका पुगेको २ महिनामै बाकस फर्किइन् झापाकी बर्खा खड्का प्रसाईँ
३.	पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने युवकलाई मलेसियन युवतिले धन्यवाद भनेपछि… समाचार
४.	श्रीमानले आफ्नै दिदिसंग यौन सम्पर्क गरेको थाहा पाएपछि ७ महिनाकी गर्भवती श्रीमतीले आत्महत्या गरिन कि कसैले गर्यो हत्या ? घटना त यस्तो डरलाग्दो पो रहेछ भिडियोमा हेर्नुहोस
५.	नेपालबाट दिल्ली जाँदै गरेको बस दु’ र्घटना १७ जनाको मृ’ त्यु
६.	सवारी दुर्घटनाबाट परी ३७ पुरुष र आठ महिलासहित तीन बालकको मृत्यु
७.	ओमिक्रोन फैलिएसँगै मलेसियामा एकैदिन कोभिड-१९ बाट ४७ जनाको मृत्यु !
८.	९ दिन सम्मको लागि माछा-मासु र म’दिरा बिक्रीमा प्र’तिबन्ध , बेच्ने’लाई क’डा का’रबाही गरिने
९.	यी युवक रातभरी ३२ किमि हिँडेर पहिलो दिन अफिस पुगेः मालिकले भावुक हुँदै उपहारमा दिए नयाँ कार
ओमिक्रोन भेरियन्ट’ कति घातक, नेपालमा फैलिने सम्भावना कति?
प्रहरी कार्यालयको बाथरुममा प्रहरी जवानकी पत्नीको शव भेटियो
यस वर्षको सर्वश्रेष्ठ ठ’हरिएको तस्वीर, जसले आँखा रसाउछ, अनि हिम्मत दिलाउँछ
कोभिडको नयाँ भेरियन्ट बाट बचाउन सकिदैन भनेर डाक्टरले लिए श्रीमती र २ सन्तान’को ज्या’ न
© Copyright 2021 Dainik Sangalo All Right Reserve.